Dowladda Soomaaliya oo shaacisay Nidaam waxbarasho oo dadka waa weyn loogu tala galay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dowladda Soomaaliya oo shaacisay Nidaam waxbarasho oo dadka waa weyn loogu tala galay
Siihayaha Wasiirka waxbarashada Xuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in dhawaan ay dowladdu shaacin doonto Natiijada Imtixaanaadkii ay qaadday wasaaraddu.
Waxaa sidoo akle uu ka dhawaajiyay Wasiir Goodax in ay diyaariyeen Nidaam waxbarasho oo seddex sano socon doona kaas oo dadka waxrashadu ka daahday loogu talagalay, nidamka ayuu sheegay in uu u sahli doono dadka waqti hore ka haray in ay si fudud ula qabsadaan wabrashada iyadoo waqti badani uusan ka lumeyn, waxana sanadkii ay qaadan doonaan dhowr fasal oo lagu siin doono Manhajka Dowladda sida uu sheegay Goodax Barre.
Waxaa sidoo kale uu sheegay siihayaha wasiirka wasaaradda waxbaarshada Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya in ay ku guuleysteen soo saaridda Manhaj nidaamsan oo sida uu sheegay guud ahaan dalka laga dhigi doono.
Imtixaanaadka dugsiga sare ee saandkaan dowladdu qaadday ayaan wali la shaacin Natiijada, waxaana taasi ay walaaac ku abuurtay ardayda doonaysa in ay Jaamacadaha ku biiraan oo sida ay sheegeen ka daahay xilligii ay Jaamacadaha dalka iska diiwaan galin lahaayeen.
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay Nidaam waxbarasho oo dadka waa weyn loogu tala galay was last modified: August 30th, 2020 by Admin
Xukuumadda Iyo Maamulka Gobalka Banaadir Oo Fariin U Dirtay Ganacsatada Soomaaliyeed